Unyaka we-hydrological 2017 uvale ngokusilela kwe-15% | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISpain ibhekene nesomiso esinzima kangangoba nakule minyaka eyishumi edlule kube nezinga eliphansi kangaka lemvula namachibi emithombo. Ukushoda kwamanzi kulo nyaka kuvalwa nge-15% ngaphansi kunonyaka odlule. Kubhekwe njengenkathi eyomile kakhulu kulo lonke elaseSpain, okuba unyaka wesishiyagalombili onemvula encane kusukela ngo-1981.
Njengoba sazi, umjikelezo we-hydrological uvalwa ngoSepthemba futhi ngokusho kwesibikezelo sezulu lesi sikwindla sizoshisa futhi somile, sinemvula encane. Yini engenziwa esimeni sesomiso esinje?
1 Unyaka owomile we-hydrological
2 Ukushoda kwamanzi nesomiso
Unyaka owomile we-hydrological
Lesi sikhathi saqala ngo-Okthoba 2016 nenyanga lapho imvula yayingaphansi kwamanani ajwayelekile, futhi yaqhubeka ngoNovemba omanzi. Ekupheleni kukaNovemba, ngezimvula eziye zaba khona, imininingwane yemvula ibuyele esimeni sayo esijwayelekile. Noma kunjalo, le datha ibifanele iziqephu zemvula enkulu futhi ungasakazeki inyanga yonke.
Kodwa-ke izibalo zehla, futhi ngaphandle kwemvula enamandla eyaqoshwa eningizimu-mpumalanga yenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic phakathi nezinyanga zikaDisemba noJanuwari, uJanuwari nayo yayiyinyanga eyomile futhi imvula enqwabelene ngonyaka we-hydrological yaqhubeka yehla. kuze kufike ku-18% inani elingaphansi kwenani elijwayelekile engxenyeni yesibili kaJanuwari.
Izinyanga zikaFebhuwari noMashi zahlala zizinzile kancane, eduze kwedatha ejwayelekile, kepha ngemuva kwalezi zinyanga, intwasahlobo yayomile kakhulu. Ukusilela kwe-hydrological ngaphansi kwenani elijwayelekile ngemuva kwentwasahlobo kwakungu-13%.
Kuleli hlobo, kube namagugu emvula 7% ngaphezu kokujwayelekile. Kepha lawa magugu awakhokhelanga ukusilela kwe-hydrological ukufika kuSepthemba kube yi-12%.
Ukushoda kwamanzi nesomiso
Unyaka we-hydrological - oqala ngo-Okthoba 1 kuya kuSepthemba 30- ivaliwe ngesilinganiso samalitha angama-551 ngemitha eyisikwele kuyo yonke iSpain, emele ukusilela kwe-15% maqondana nenani elijwayelekile (amalitha angama-648 ngemitha eyisikwele).
Lokhu kwenza lo nyaka wome kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isidingo samanzi siyaqhubeka nokufana noma ngaphezulu, ngakho-ke mancane futhi mancane amanzi atholakalayo.
Amanzi ayinsiza ebaluleke kakhulu futhi kufanele sifunde ukuwanakekela sisonke, ngoba asazi ukuthi izophinde line nini.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » Unyaka we-hydrological 2017 uvale ngokusilela kwe-15%